Qaababka Ugu Wanaagsan Ee Aad U Seexaneysid Markaad Uurka Leedahay (Aqriso) - Aayaha
Home/CAAFIMAADKA/Qaababka Ugu Wanaagsan Ee Aad U Seexaneysid Markaad Uurka Leedahay (Aqriso)
Qaababka Ugu Wanaagsan Ee Aad U Seexaneysid Markaad Uurka Leedahay (Aqriso)
Dhammaanteen waxaan u seexanaa qaabab kala duwan oo aan isleenahay waadku hurdi kartaa, si kastaba haweeneyda markii ay uur yeelato waa inay bedeshaa.
Markii aad uur yeelatid, caafimaadkaaga iyo kan canuga caloosha ku jiro ayaa wax walbo ka muhiimsan, haddaba qaababka aad u seexaneysid waa inay noqdaan kuwo uwanaagsan canuugaaga.
Bilaha ugu horeeyo ee uurkaaga waxaad u seexan kartaa sidaa doontid balse markii ay caloosha soo weynaato oo nuux nuuxsi ay keento waxaad u baahantahay inaad bedeshid qaababkii hore ee aad u seexan jirtay waxaad ogaaneysaa inaadan caloosha ku seexan karin.
Haddaba waxaad heysataa labadaan dookh oo kala ah inaad dhabar dhabar u seexatid iyo inaad dhinac dhinac u seexatid.
Inkastoo markii aad dhabar dhabar u seexatid aad dareemi kartid raaxo hadana dhaqaatiirta ma aysan amaanin qaabkaas.
Useexashada dhabar dhabar waxay sameyneysaa nidaamka neefta isla markaana waxay keenysaa xanuun sidaa darteed waxay sidoo kale saameyneysa wareega dhiiga iyo nafaqeynta ilmaha yar ee caloosha ku jira.
Hoos u dhaca wareegga dhiigga ee jirkaaga waxuu halis galinayaa caafimaadka canuga, cilmi baaris ayaa sheegeytay in haweenka dhabar dhabar u seexda markii uurka leeyihiin ay qatar ugu jiraan inay dhalaan caruur aan bila dhanmeysan.
Sidaa darteed, qaabkee ayaa ugu waagsan inay haweeneyda u seexato markii ay uurka leedahay?
Qaabka kaliya ee ay tahay inaad u seexatid ayaa ah dhinac dhinac, gaar ahaan waa inaad u seexataa dhinaca bidix kaasoo ammaan u ah adiga iyo Canugaba.
Haddii dhinac useexashada aadan u baran waadku cel celineysaa bilaha ugu horeeyo ee uurka taas waxay kaa caawin doontaa inaad la qabsatid.
3 worst mistakes you should never make in your 30s
Wax Ka Ogoow Xanuunka Ku Dhaca Xiidmaha Kana Fogoow Waxyaabahan
Ma Jiro Nin Qiyaani Doona Xaaskiisa Marka uu Aqriyo Warbixintaan Kadib
Waxbadan Ka Ogoow Cudurka Dhiig Karka & Calaamadaha Lagu Garto (Symptoms Of High Blood Pressure)
3 things to expect if she uses coconut oil daily
Astaamaha Lagu Garto Qofka Caruurta Afduubto
Noocyada Ragga Noqdo Niman Wanaagsan Ee Haweenku Raadiyaan
3 Siyaabood oo aad ku bedeli karto nolosha caruurta agoonta ah
Ha Iska Deyn Lamaanahaaga Haddii Ay Leedahay Afartaan Sifood
3 types of vitamins you might be lacking if you have trouble sleeping
3 waxyaabood oo dumarka aysan jecleyn, wax ka baro